Al-Khelaifi Oo Taageero Buuxo Siiyay Macalalinka PSG Unai Emery. | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Europe » Champions League » Al-Khelaifi Oo Taageero Buuxo Siiyay Macalalinka PSG Unai Emery.
Al-Khelaifi Oo Taageero Buuxo Siiyay Macalalinka PSG Unai Emery.	Waxaa Qoray: Abbas Ali Hassan Taariikh: 11-March-2017
Unai Emery shaqadiisa waa inuusan ka cabsan asagoo fiirinaayo kasoo haristii Paris Saint-Germain Champions League.
Madaxweynaha kooxda Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ayaa si wayn u taageeray macalin Unai Emery kasoo hogaamiyay kooxdii kasoo hartay Champions League, tasoo sababsatay kooxda Barcelona.
PSG ayaa si wayn ugu muuqatay inay u gudubtay wareega sided dhamaadka ee Champions League ga, maadaama aya 4-0 ku adkaadeen lugtii hore, laakiin 6-1 ayaa lagu garaacay markii la aaday lugtii labaad garoonka Camp Nou, sida aan wada ognahay PSG ayaa sababsatay goolkii uu dhaliyay ciyaaryahan Sergi Roberto daqiiqadihii dhamaadka.
Emery ayaa kusoo biiray kooxda PSG asagoo macalin u noqday kooxdaan xilli ciyaareedkan bilawgiisa kasoo lakeenay garoonka lagu magacaabo Parc des Princes, macalinkaan ayaa la keenay kadib markii uu macalinkii asaga ka horeeyay ee Laurent Blanc uu ku guuldareystay Champions League inuu kooxda ku hogaamiyo.
“Kadib markii ay ku fashilmeen, qofwalba waa inuu qaataa masuuliyadiisa,” Al-Khelaifi ayaa u sheegay Parisien.
“Taasi anigoo madaxweynaa ayaan ahaa, agaasimayaasha isboortiga, tababaraha iyo sidoo kale ciyaartoyda.
“Tanii markii uu yimid, Emery ayaa u shaqeeyay si cajiiba oo adag maalin kasta si uu uga caawiyo kooxda weerarkeeda.